July 2018 – Page2– Nagarik Network
कसले उचाल्ला विश्वकप २०१८ को उपाधि ?
रसिया विश्वकपको फाइनल खेल शुरु हुन केहि समय बाँकि रहदा नेपाली दर्शकले दिएको प्रतिक्रिया । रसियामा हुँदै गरेको फिफा विश्वकपको आजको फाइनल खेलमा फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्दैछन । विश्वकपको रौनकले नेपाली दर्शक र खेलप्रेमिलाई पनि एक महिना यता छपक्कै छोपेको छ ।
प्रधानमन्त्री ज्यू चिकित्सा शिक्षा पानीजहाज जस्तो होइन : गगन थापा ||
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनशनरत प्राडा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ। माइतीघरबाट सुरु भएको र्‍याली बानेश्वरमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। र्‍यालीमा भोकै बस्ने कसैलाई रहर हुँदैन, नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। र्‍यालीमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, प्रा. केदारभक्त माथेमा लगायतको सहभागिता थियो।
आमाको श्राद्ध गर्न लाग्दा घर डुबानमा परेपछि…
अविरल बर्षाका कारण आएको बाढीले बिहीबार भक्तपुर जलमग्न भयो। हनुमन्ते खोलाको भेलले यहाँका घरहरु डुबानमा परे। सर्वसाधारण घरभित्रै बन्धक जस्तै भए। सुरक्षाकर्मीले कपितयको उद्धार गरे। सडकपनि जलमग्न भयो। जताततै पानी मात्रै देखिन्थो। यहि डुबान क्षेत्रमा भेटिए– लुमनीदत्त पराजुली।
विहान साढे सात बजे पानी पस्दा उनी घरभित्रै थिए। उनको घरमा आज आमाको श्राद्धको दिन थियो। खाना बनाउने, अचार बनाउने धमाधम तयारी थियो। एक्कासी आपत आइलाग्यो। निकाल्ने, पकाउने कुरा केही भएन। सबैतिर पानी पस्यो। उनका ज्वाइले उनलाई र उनकी श्रीमतीलाई बोेकेर माथिल्लो तलामा लगे। पानी यताबाट आउने बित्तिकै लौ के गर्ने भनेर सोच्दा सोच्दै सबै भित्र पसिहाल्यो। उनीहरुले बाहिर निस्कने मौका नै पाएनन्। उनलाई दुई जानाले बोकेर छतमा लगे। खाना पनि माथि नै खाए उनले। उनी भन्छन्– ‘यही जिउ मात्र बाँकी छ, अरु सबै पानीले डुबायो।’
यो लुमनीदत्त पराजुलीको मात्र हैन, डुबान क्षेत्रमा परेका सयौको साझा कथा हो।